Mumwe Armati 5 vanotanga pahotera Chirongwa China, Asia, welcome kuti ashanyire hotera iri kuona tepi kwedu.
Armati 447 dzakatevedzana tepi catalouge ndapota tarisa zvinotevera:
Changsha weVaya International Hotel
Set mune chikuru nzvimbo Changsha, Changsha weVaya International Hotel anoisa zvose guta rine kupa chete kunze hwaswedera. The pfuma chinoratidza siyana zvivako kuti mutsigiri wako chinofadza. Kushandisa hotera wacho 24-awa mukamuri basa, nzvimbo basa, mhuri mukamuri, motokari Park, zvivako nokuti vakaremara vaenzi. Guestrooms vari yakanyatsoiswa vose Amenities iwe vanoda kuti kurara zvakanaka usiku. Mune dzimwe dzimba, vaeni angawana terevhizheni, internet access - Lan (kwokurumbidza), asiri kusvuta makamuri, internet access - Wireless, yokugezera. Kugonesa vaenzi 'kugara, hotera inopa kuzvivaraidza zvivako akadai gorofu kosi (panzvimbo yacho), sauna, muviri, kylpylä, indoor dziva. Friendly mudonzvo, zvivako zvikuru uye pedyo napedyo zvose Changsha ane kupa vane zvitatu zvikonzero zvikuru unofanira kugara Changsha weVaya International Hotel